Eessaa kaanee eessarra geenyee? | QEERROO
Eessaa kaanee eessarra geenyee?
Posted on January 18, 2018 by Qeerroo
“Qabsoon hadhooftuudha”jecha qabsaa’otaati.
Eeyyee dhuguma qabsoon hadhooftuudha. Mi’aa hinqabdu. Hadhooftuu dhangaggooftuudha. Gaafa kaatu fira nama baay’ifti, gaafii kophaas nama hanbifti. Gaafa fira daneessitu baraguun amala qabsaa’aas miti, akkasuma gaafa kophaa nama hanbiftu abdii nama kutachiiftee nama harkaa bahuuf baatee dhabamuuf yoo sochootees qabsaa’aan jabaatee dhaabata. Irbuudhaka, irbuutu hinsuphamu, hingatamu. Baraan haataadha. Gaafa gabaa taatee deemtus gaafa yarattee nama muraasaan qabsooftus kaayyoo uummataarraa daqiiqaaf sekandiif irraa maquu hinqabdu. Kaayyoon uummataa sirka waan jiruuf jechuudha. Uummatakeef qabsooftee garbummaa jalaa uummatakee baasuuf qabsootti waan jirtuuf jechuudha.
Ati yoomuu qaama uummanni hordofudha malee qaama ayyalallataa hordofee uummata asiif achi dhommoqsu miti. Qabsoo gootuun bu’aawwan xixiqqoo qabsoo keetiin argatte akka waan diinnikee sii hiixatee siif laateetti, akka waan diinnikee sii firoometti ilaalta taanan nyaatamteetta. Kamaafoo? Kanaafimmoo yeroo kamuu bu’aawwan xixiqqoof arcaatuu halagaan sitti hiixatuun qabsoo dhaabuun matuma eessattiyyuu sirra hinjiraatu. Kaayyoo kee bira gahuuf karaa cirachuu qabda. Karaa gaafa cirte konkolaataan irra deemuuf sii salphata. Konkolaataan gaafa deemtummaa ariitiin akka galma geessu si taasisa. Kanaaf, gaafa gaaffiinkee muraasni deebii argatu karaa ciruukee hubadhu.
Kaleessa karaa walxaxaa harangamaaf Qoreen guutame keessa deemaa turre. Qoree qabsoof harangamaa Qabsoo, bu’aa ba’iiwwan marayyuu damdamattee kan yoona geese, jaallan qaqqaalii lubbuun itti dhabaa, dhiiga dhangalaasaa, itti hidhamaa kan yoona geesse ati furtuu uummatichaati. Furtuun abbaa argeef hinlaatamu. Futtuun uummata kanaaf, furtuun bilisummaa halagaa harka hinjiru. Gantuuf galtuuttis hinkennamne. Furtuun Bilisummaa uummata Oromoo Qeerroo Bilisummaaf qaamoota akkasuma jaarmiyaalee ABO cina dhaabbatan harka jira.
Karaan keenya kaleessaa walxaxaa ture jenne mitii? Inni har’aas akkanuma. Akkuma karaan keenya walxaxaa ta’e Qottoo ittiin cicciruu dandeenyu Waaqayyoo nu badhaaseera. Qottoon daandii qabsoo nu saaqu Tokkummaadha. Tokkummaan keenya daandii keenya tolcha, qoree karaarraa maqsa. Diinaaf hojii manaa laachuu danda’uu qaba.
Har’a Dr. Mararaa dabalatee hidhamtoonni kurnootaan lakkaa’aman ba’uuf deemu. Hidhamtoonni ba’aa jiran hidhamaa siyyaasaa Oromoo maraa? Lakki. Hidhamtoota kana Wayyaaneetu ykn Jaarmiyaa Wayyaanee OPDO tu baasaa jiraa? Lakki. Eenyuree? Qabsoo nuti goonetu akkasaan bahan taasise. Boris qabsoo jabaa yoo goone dhimma bilisummaa hingonfanneef hinqabnu.
Karaaf daandiin filmaataaf filmaanni qabsoo FXG ammas gadjabeessuudha. ABO’n hogganamnee ammas sochii goonu fardeessuudha. Diina keenya kokkee qabuun ammas itti fufuu qaba. Hanga yoomitti? Hanga Bilisummaa argannee abbaa biyyummaa gonfannutti.
Duuchaatti eessaa kaanee, eessarra geenyeerra ka jedhuuf akkasuma eessa turre maal keessa jirra jechuuf qabsoorra turre, qabsoorras jirra. Qabsoon ammas itti fufa. Qabsoon keenya akka waan namootni muraasni yoo hiikaman dhaabbatuutti kanneen yaadan yoo jiraatan of gowwomsan. Qabsoo keenya Wayyaaneen uummata saamaa waggoota hangana jiraataa tureef jiru hanaganni seeratti dhiyaatutti itti fufa. Qaamota saamtota biyya keenya qabatan biyya keenya Oromiyaarra hanga gaafa gaggeessinuutti qabsoon itti fufa.